‘Mamatsy Vola Ireo Mpikirakira Zava-mahadomelina, Amin’ny Fomba Goldman Sachs’ · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, polski, English
Ny Alahady 28 May, notaterin'ny Gazety Wall Street fa nividy trosa venezoeliana mitentina 2,8 lavitrisa dolara amin'ny vidiny 31 santima ny dolara iray, ilay orinasa Amerikana maro rantsana erantany, Goldman Sachs. Navoakan'ny PDVSA, orinasam-panjakana misahana ny solika, ireo trosa ireo ary ho tapitra amin'ny 2022, izay mitovy amin'ny fanomezana lelavola 865 tapitrisa dolara mahery ho an'ny fanjakana venezoeliana, izay voakenda ara-bola sy voatsipaka mafy.
Nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ”Financing Narcos the Goldman Sachs Way“ [Mamatsy Vola Ireo Mpikirakira Zava-mahadomelina, Amin'ny Fomba Goldman Sachs]” tao amin'ny Medium i Juan Bermudez, teknolojista sady mpandraharaha, ho ”fanazavàna ny rafitra pôlitika ao Venezoela sy hanakarana ny tsy firaharahiana lalina ny fitsipi-pitondrantena ao amin'ny Goldman Sachs”. Araka ny voalazan'i Bermudez :
Tsy manainga fanohanana sy fanajana toa ilay nodimbiasany i Nicolás Maduro, mpandimby notsongaina an'i Hugo Chavez. Eo anivonà krizy ara-toekarena naharitra telo taona miaraka amin'ny haavon'ny heloka bevava mifono herisetra sy ny fahantrana tsy takatra hatrizay, vao mainka nilentika kokoa ny lazan'i Maduro taorian'ny fanonganam-panjakana nataony tamin'ny tenany tamin'ny 30 Martsa, rehefa nosandohan'ny Fitsarana Tampony ny anjara asan'ny Antenimieram-pirenena amin'ny fanomezany alàlana ny Filoha Maduro mba hitazona ny sasany amin'ireo asan'ny mpanao lalàna — famindra izay nitsimbadika telo andro taty aoriana. Tsy irery ny fanoherana ao Venezoela tamin'ny fanamelohana izany famindra ara-pôlitika izany: nanasazy mpitsara valo avy ao amin'ny Fitsaràna Tampony Venezoeliana i Etazonia, amin'ny fangiazana ny fananany sy amin'ny fanaisorana ny fahazoandàlan-dry zareo hivezivezy any Etazonia, ho sazy tamin'ny fanendahany ny Kôngresy Venezoeliana.
Telo volana nahitàna fihetsiketsehana isanandro no nisy nanomboka tamin'izay, ary olona 60 farafahakeliny no maty tao anatin'ny fifanandrinan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana. An'aliny farafahakeliny ireo mpanao fihetsiketsehana nahiditra am-ponja. Manampy i Bermudez :
Malaza ho iray amin'ireo tetezana lehibe indrindra eran-tany fivezivezen'ny zava-mahadomelina i Venezoela. Fitoeran'ny “El Cartel de los Soles” ( Ny Kartelin'ny Masoandro) izy, izay tambajotranà zava-mahadomelina tarihinà mpitondra fanjakana sy ireo manampahefana ambony ao amin'ny tafika, miara-miasa amin'ny FARC, fikambanana Kolombiana mpampihorohoro sady mpikirakira zava-mahadomelina. Mindrana ny anarany avy amin'ireo medaly lanjain'ireo manamboninahitra eo ambony sorony ilay kartely.
Ka hatramin'izao, ny vahaolan'i Maduro dia ny fampiantsoana ”antenimiera mpandrafitra” iray izay hanova ny lalàmpanorenan'ny firenena amin'izao fotoana izao (fandaminana iray mbola tsy ankatoavin'ny ankamaroan'ny vahoaka venezoeliana) sy ny firongatry ny heri-pamoretana ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fepetra amin'ny tany tsy milamina sy ny fanamafisana ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana eo amin'ireo mpanohitra. Eo afovoan'izany korontana izany, manome ny heviny mikasika ireo fividianana mampiady hevitra ataon'ny Goldman Sachs i Bermudez: